Toriteny - Page 3 sur 10 - Lalamasaka Hatry ny Ela
Accueil - Toriteny - Page 3
par Administrator · Published 22 novembre 2019 · Last modified 27 février 2020
Misy marina ny Helo
Nitory teny Sr Daoud indray andro, « Misy marina ny Helo » no lohateny. Nitantara izy fa nisy fikambanana ingénieur minier rosiana tarihin’ingahy Azzacov, nandavaka tany ambanin’ny tany. Rehefa nahalavaka tany amin’ny 14,4km izy ireo dia nisy fitrangan-javatra mahatsiravina. Nihanafana ny fanambanin’ny tany, ary nanomboka naheno feo sy hiaka mahatsiravina izy ireo. Rehefa tsy zakan’izy ireo ny fihainoana izany dia nanapa-kevitra fa...
Rehefa ny olona eny amin’ny arabe no matahotra ny hiloa-bava hamoaka teny manohitra an’Andriamanitra fandrao hianjeran’ny FITSARAN’ANDRIAMANITRA ; REHEFA NY MPANOTA ampangorohoroan’ny FANATREHAN’ANDRIAMANITRA, mangovitra eny an’arabe ka mitalaho famindrampo ; rehefa mifofofofo mamaky vohitra sy ny tanana ny hery tsy TAKATR’OLOMBELONA « FANAHY MASINA », ka mahazo mafy ny olona amin’ny fiaikena mampivarahontsana, na dia tsy nisy FIVORIANA manokana na FAMPIELEZANA akory aza...